Uncategorized – Myanmar
တောင်ပေါ်သို့လမ်းလျှောက်ထွက်ရင်း သစ်ပင်မှာဦးချိုနဲ့ညပ်မိနေတဲ့တောင်ဆိတ်ကို ကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့အမျိုးသား (ရုပ်သံ)
ယခုဖော်ပြမဲ့ video ဟာ 2015 ခုနှစ်ကတည်းက social media ပေါ်မှာရေပန်းစားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၊ ယခုနောက်ပိုင်းမှတစ်ဖန် ထပ်ပြီး ရေပန်းစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ လူတွေဟာအပြင်သိပ်မထွက်ဘဲ နေအိမ်အတွင်းမှာသာနေထိုင်ကြရင်းနဲ့ တိရစ္ဆာန်ကယ်တင်ပေးတဲ့ video တွေကိုပြန်ကြည့်ဖြစ်ကြပြီး ၊ ခရီးထွက်ကာ စိတ်အပန်းဖြေချင်နေကြလို့ပါပဲ ။ Krystof Wlodarczyk […]
အခုလိုရောဂါကာလအခြေအနေတွေကြောင့် အသွားအလာကန့်သတ်မှုတွေ ဖြေလျော့ပေးလိုက်ပေမဲ့လည်း ၊ လူအများစုကတော့ အပြင်သိပ်မထွက်တော့ဘဲ Delivery များကိုသာ အားကိုးပြီး လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယနေကြဆဲပါဘဲ ။ သို့ပေမဲ့လည်း Delivery သမားတွေဟာ ရာသီဥတုအခြေအနေ ၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ တွေသာမက ခွေးတွေရဲ့ ရန်ကနေလည်း ကြောက်ရွံ့နေရတာကို ယခုဖော်ပြမဲ့ video မှာ […]
သရဲခြောက်တဲ့ အိမ်ကြီးမှာ ဝိညာဉ်ရဲ. ဒိန်းခြင်းကို ခံရတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်
သူမ အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်မှာ သူမရဲ. ဦးလေးဖြစ်သူဟာ ဒီအိမ်ကြီးကို သူမတို့မိသားစုဆီ ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ရောင်းချခဲ့ပါတယ် ။ သူတို့ဟာ ဒီအိမ်ကြီးမှာ နေထိုင်စဉ် ခက်ခဲမှုများစွာ ကြုံရပြီး ငှားရမ်းဖို့ကြိုးစားပေမယ့်လည်း ငွေကြေးပြသာနာကြောင့် အဆင်မပြေတာမို့ သူမရဲ. ဖခင်ဆီကို ရောင်းချခဲ့တာပါ ။ သူမတို့မိသားစုဟာ ဒီအိမ်ကြီးကို […]
စတိုးဆိုင်တွေ အတော်များများဟာ ယခုဆိုရင် CCTV တွေတပ်ထားလေ့ရှိပြီး ၊ မသာမာမူတွေမရှိအောင် ဂရုတစိုက်ကြည့်ရှုလေ့ရှိကြပါတယ် ။ သို့ပေမဲ့လည်း မလေးရှားနိုင်ငံ ၊ Melaka မြို့မှာရှိတဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ စင်ကာပူနိုင်ငံသားတစ်ဦးဟာ RM 1,400 ( မြန်မာငွေ 5သိန်း ဝန်းကျင်)ရှိတဲ့ မျက်မှန်ကိုခိုးယူခဲ့ပြီး CCTV က […]
တော်တော်လေးကို ဗရုတ်သုတ်ခကျလွန်းတဲ့အခြေအနေလို့ပြောလို့ရပါတယ် ။ လူကြားထဲမှာ ချီးပေါက်တဲ့ဖြစ်ရပ်မျိုးကိုတော့ လူတိုင်းလိုလိုကြုံဖူးကြပေမဲ့ ဝမ်းမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ ချီးပေါက်ရင်တောင်ထွက်ကျတတ်လို့ယုံလို့မရပါဘူး ။ မကြာသေးခင်ကမှ ဖုန်းဆိုင်တစ်ခုမှာအမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ မတော်တဆဘောင်းဘီထဲချီးပါချခဲ့ပေမဲ့လည်း တည်ငြိမ်အေးဆေးစွာနဲ့ပဲ သူ၏လုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ် ။ အဆိုပါ 15 စက္ကန့်သာကြာမြင့်တဲ့ Video ထဲမှာတော့ ဖုန်းဆိုင်ထဲမှာ အပြာရောင်ဘောင်းဘီအတိုနဲ့ T-shirt အမဲရောင်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ သူဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကို […]
ရန်ကုန်မြို့က နေ့စဉ် ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြသနာတွေထဲမှာ ကားပါကင်ကိစ္စကလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကားကို ရပ်လို့ရရင်ပြီးရော ရှေ့လူနောက်လူကိုယ်ချင်းမစာ ဖြစ်သလို ရပ်နားတက်ကြသူတွေရှိသလို ကားရှေ့မှာ ပိတ်ရပ်ပြီး ဆက်သွယ်ရမယ့် ဖုန်းနံပါတ်လည်း ချန်မထားခဲ့တာကြောင့် ဒုက္ခရောက်ရတဲ့ အဖြစ်တွေလည်း များစွာရှိနေပါတယ်။ ဒီလိုပြဿနာတွေကနေ တစ်ဆင့် မလိုလားအပ်တဲ့ ရန်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်ပြီး အသက် ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ထိ […]
တရုတ်နိုင်ငံက ” Childbirth bars” ဗီဒီယိုဟာ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ ရေပန်းစားနေပါတယ်။ ဒီဗီဒီယိုမှာ ယောကျ်ားလေးတွေက မိန်မသားတွေရဲ့ကလေးမွေးတဲ့နာကျင်မှု အတွေ့ကြုံကို ခံစားကြည့်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အတွက် ငယ်သံပါလောက်အောင် ဒီနာကျင်မှုကို တော်တော်ပြင်းထန်တယ်ထင်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုထဲမှာ အော်နေကြတာကြည့်ပြီး မိန်းမသားတွေကတော့ ခွီလို့ပေါ့။ ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီလောက်နာကျင်မှုကို သူတို့သိမှ မိန်းမတွေကို […]
ကျွန်တော်တို့တက်ရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့မင်္ဂလာပွဲတွေမှာ သတို့သားနဲ့သတို့သမီးက ရှေ့ဆက်မယ့်သူတို့ဘဝအတွက် “ကောင်းအတူ ဆိုးအတူ ၊ချမ်းသာဆင်းရဲအတူ၊ကျန်းမာပျှော်ရွှင်စွာနဲ့အတူတူ ဖြတ်သန်းသွားကြမယ်”စတဲ့စကားတွေ ကတိသစ္စာပြုကြတာကို တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ဒါပေမဲ့ အခုမင်္ဂလာစုံတွဲတစ်တွဲအတွက်ကိုတော့ ကံတရားကြီးကမျက်နှာသာမပေးခဲ့ပါဘူး။ အခုအဖြစ်အပျက်ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံ Connecticutပြည်နယ် Hartfordမြို့ St. Francis ဆေးရုံမှာ ဖြစ်ပွါးခဲ့တာပါ။အသက် ၃၅နှစ်အရွယ် David Mosherအမည်ရှိတဲ့အမျိုးသားနဲ့ သူ့ချစ်သူအသက် ၃၂နှစ်အရွယ် Heather […]
Music Zone KTV ပိုင်ရှင်နှင့် မန်နေဂျာ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့ရဲစခန်းတွင် အဖမ်းခံ(ရုပ်သံ)
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် Music Zone KTV ၏ ပိုင်ရှင်နှင့် မန်နေဂျာတို့ သင်္ဃန်ကျွန်းမြို့မရဲစခန်းတွင် အဖမ်းခံခဲ့ကြောင်း သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးရွှေလှဝင်းက ယနေ့(အောက်တိုဘာ ၄ ရက်) တွင် ပြောကြားသည်။ “မှန်ပါတယ်။ မနေ့ည ၉ နာရီခွဲလောက်မှာ ရဲလက်ထဲ ရောက်ပါပြီ။ […]
သမ္မတထရမ့်ရဲ့ အရေးအကြီးဆုံး (၄၈) နာရီနှင့် ဘယ်လိုကုသမှုတွေ ပေးနေသလဲ ဆိုတာ
အားလုံးက အမေရိကန်သမ္မတတစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုကုသမှုတွေပေးနေသလဲဆိုတာ သိချင်ကြမှာပါ။ မဖြစ်မနေကယ်ရမယ့်လူကို ဘာဆေးတွေပေးသလဲ? ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲပေါ့။ ထရမ့်ရဲ့ ဆေးရုံတက်ပြီးပထမဆုံး ၄၈ နာရီဟာ အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ ရောဂါအခြေအနေဟာ ဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်မှာလား? မကြာခင်မှာ သက်သာပြီး သမ္မတတာဝန်တွေပြန်လည်ထမ်းဆောင်နိုင်မှာလား? ထရမ့်အခြေအနေကကောင်းပုံရတယ်။ ဆေးရုံရှိရုံးခန်းကနေ စကားပြောတဲ့ ၄ မိနစ် ဗီဒီယိုထဲမှာ သူအခြေအနေကောင်းပြီး မကြာခင်ပြန်လာမယ်လို့ပြောတယ်။ […]